Sivubela intuthuko Newspaper
MAGAYE CELE OMUNYE wabadlali beqembu laseThekwini, iLamontville Golden Arrows uthi ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ukubhakuzisa inethi ukwenza kube umthwalo wakhe kule sizini ka-2021/2022. Loyo ngumdlali osamncane kodwa…
TSEPO MOTLOKOA UMNYANGO wezokuTHuthukiswa koMphaakthi KwaZulu-Natal oholwa wuMphathiswa uNkk Nonhlanhla Khoza unxusa abazali ukuqikelela ukubhalisa izingane zabo ezinkulisa ezisemthethweni lapho benesiqiniseko sokuthi izingane zabo…
TSEPO MOTLOKOA ISIFUNDAZWE saKwaZulu-Natal silungisela umcimbi omkhulukazi we-Intra African Trade Fair (IATF2021) okulindeleke ukuba kube nemiviliyelo emigaqweni yaseThekwini ngesikhathi kuzocikicwa isivumelwano salo mcimbi. …
MAGAYE CELE UMKHANDLU waKwaDukuza oGwini olusenyakatho yeKwaZulu Natal oholwa nguKhansela Dolly Govender sewusungule uhlelo lokulekelela izinnhlangano ezingenzi nzuzo zakuyona le ndawo ngoxhaso lwemali. Ngokujwayelekile lolu xhaso…
MAGAYE CELE UMNYANGO wezoLimo KwaZulu Natal usunikele ngemali engu-R58 million kumapulaza akulesi siFundazwe ngenhloso yokuwafukula. Lolu xhaso olubonakala luzothela izithelo ezinhle kakhulu luqininisekiswe nguNgqongqoshe…
MAGAYE CELE UMKHANDLU weTheku oholwa nguKhansela uMxolisi Kaunda unohlelo lokubeka eceleni izindodla zemali ezizosetshenziselwa ukuthi kuvikelwe ingqalasizinda yaleli dolobha. Lokhu lo Mkhandlu uzobe ukwenza ukuze ugweme…